Ambodin'Isotry :: Dimy lahy nirongo basy nanafika fivarotana • AoRaha
Nirefodrefotra ny poa-basy teny Ambodin’Isotry, afak’omaly hariva. Notafihin’ny lehilahy dimy nitondra fitaovam-piadiana ny fivarotana iray izay sady misy toerana fikirakirana vola amin’ny alalan’ny finday. Nisy ny olona naratra, tamin’io fanafihan-jiolahy io. Tsy mbola voafaritra kosa ny vola voaroba. Tsy nisy ny aina nafoy.
Nikoropaka sy nandositra nanavotra aina ny olona nahita ny fahatongavan’ireo jiolahy teny Ambodin’Isotry. Nanapoaka basy, avy hatrany, ireo olon-dratsy, vantany vao tonga teny an-toerana. Nambaran’ny olona milaza ho nahita ny zava-niseho fa nisy olona vitsivitsy naratra nolalovan’ny bala. Ny polisy kosa milaza fa olona efatra no naratra, nandritra ny savorovoro sy fifanjevoana.
Kitapo iray no lasan’ireo jiolahy, araka ny tatitra avy amin’ny polisy hatrany. “Mifamahofaho ny filazana momba ny vola sy ny zavatra voaroba. Aorian’ny famotorana no hahafantarana izany”, hoy ny mpanao famotorana.
Loza teny Ampitatafika :: Fiara nitondra masera nivarina tany an-tanimbary
Fanjonoana farihy maloto :: Nogadraina ny lehilahy roa naka trondro tetsy Masay